Maxaan sameynaa si aan u cusbooneysiino badmaaxa gaariga? | Ragga Stylish
El gawaarida gawaarida ayaa is taagay sida qalab muhiim u ah safaradayada iyo safaradayada.
Iyadoo la horumarinayo tiknoolajiyada, waxaan markhaati ka nahay isugeynta iyo kala duwanaanta adduunka dhijitaalka ah.
Waqtigii raadinta waddo ay ahayd in la dhigto oo la weydiiyo dadka jidka maraya waxay umuuqataa inay dhammaatay.
1 Cusboonaysiinta Nawaaxiga gaariga
2 Adduun dhaqdhaqaaq joogto ah
3 Sida loo cusbooneysiiyo - nidaam deg deg ah oo fudud
Cusboonaysiinta Nawaaxiga gaariga
Ilaa laba ama seddex sano ka hor, cusbooneysiinta hagaha gawaarida wuxuu ahaa nidaam adag oo loogu talagalay milkiilayaasha gawaarida. Nidaamyada gundhigga ah ayaa kaliya taageeray cusboonaysiinta sanadlaha ah (noocyada qaar baa ilaaliyaa inta jeer ee soo socota). Si kastaba ha noqotee, si loo helo xogta cusub, kaarka xusuusta ama DVD waa in laga dalbadaa soo saaraha oo lagu rakibaa gacanta.
Xaaladaha qaarkood, markii ugu dambayntii cusbooneysiinta la rakibay, macluumaadka cusubi wuxuu ahaa mid taariikhsan.
Adduun dhaqdhaqaaq joogto ah
Waxaa lagu qiyaasaa in khariidadaha meeraha ay dhibaato ka soo gaarto ilaa 2,7 milyan oo isbeddel ah maalin kasta. Kaliya Spain, celceliska sanadlaha ee cusbooneysiinta waa 2.000 kiis.
Waddooyinka beddela magacyadooda ama macnahooda wareegga, dhismayaasha cusub iyo kuwa kale ee baaba'aya, marka lagu daro shilal badan, qorsheysan ama shil ah, oo ku lug leh wax ka beddelka juqraafiga ee meel.
Sida loo cusbooneysiiyo - nidaam deg deg ah oo fudud
Si loo cusbooneysiiyo aaladaha gundhigga ugu badan, kaliya dkala soo bax kumbuyuutarka kumbuyuutar kuna keydi aaladda USB oo leh ugu yaraan 4GB oo keyd ah. Waxa soo socda ayaa ah in lagu xiro qaybta keydinta macluumaadka ee ku jira barta USB-ga gaariga oo la raaco dardar-shaashadda.
Isla mabda’a ayaa lagu dabaqayaa qalabka aan isku dhafaneyn, marka laga reebo in ay u mahadcelinayaan dabeecaddooda laptop-ka ay toos ugu xirmaan kombuyuutarka.
Iyaga baabuurta "safka", darawallada ayaa toos uga hela digniinta cusbooneysiinta shaashadda, xilli iyo si otomaatig ah. Cusboonaysiinta softiweerku waxay ku socotaa asalka, sidaas darteed GPS-ku wuxuu sii wadaa inuu si caadi ah u shaqeeyo.
Ilaha sawirka: YouTube / Garmin
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Sida loo cusbooneysiiyo hagaha gaariga
Zara ayaa ku sharraxday joogtaynta tifaftirkeedii ugu dambeeyay
Tabaha lagu ciyaaro Rinjiga